SAWIRO:- Boqorka Sucuudiga oo hogaamiyayaasha Itoobiya iyo Eriteriya gundoonsiiyey biladda ugu sareysay dalkiisa. – Madal Furan
Hoy > Warka > SAWIRO:- Boqorka Sucuudiga oo hogaamiyayaasha Itoobiya iyo Eriteriya gundoonsiiyey biladda ugu sareysay dalkiisa.
SAWIRO:- Boqorka Sucuudiga oo hogaamiyayaasha Itoobiya iyo Eriteriya gundoonsiiyey biladda ugu sareysay dalkiisa.
Editor September 17, 2018 0
Riyadh (Madal Furan) – Boqorka Sucuudi Carabiya Salman Bin Cabdulcasiis ayaa biladdii ugu sareysay ee Boqortooyada guddoonsiiyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki.
Shirka Nabadda ee lagu saxiixayo heshiiska dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa ka socda magaalada Jeddah, iyadoo ay goobjoog ka yihiin Dhaxalsugaha Boqortooyada Sucuudi Carabiya Maxamed Bin Salmaan, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Antonio Gutterres iyo mas’uuliyiin kale.
Boqortooyada Sucuudiga ayaa door weyn ku laheyd heshiiska Itoobiya iyo Eritrea oo lagu soo afjaray colaadii labada dal u dhaxeysa muddo labaatan sano ah, isla markaana uu caadi ku soo laabtay xiriirkii labada dal.
Buurdhuubo: Ciidamada Xoogga Dalka oo howlgal Al-shabaab ay kaga hortegayaan ka fuliyey.
Agaasime ku xigeenkii hore ee FBI-da oo soo bandhigay warqad sir ah
Dood looga hadlay khilaafka Puntland iyo DFS oo Garoowe lagu qabtay